Jadon Sancho oo doortay kooxda uu jeclaan lahaa inuu ku biiro, haddii uu ka tago Dortmund… (Man United mise Liverpool?) – Gool FM
(Yurub) 31 Dis 2020. Liverpool ayaa soo gashay loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga caalamiga ah ee Jadon Sancho, sida ay qoreen wargeysyada, ciyaaryahanka Borussia Dortmund ayaa leh rabitaan qeexan ee ku aadan inuu ku biiro Reds.
Sida laga soo xigtay “Que Golazo podcast”, Liverpool ayaa indha indheynaysa Sancho waxayna qorsheeneysaa inay kula soo wareegto heshiis rikoor ah oo gaaraya 110 million pounds.
Klopp ayaa isku dayaya inuu xoojiyo safka kooxda Liverpool, gaar ahaan dhanka weerarka, wuxuuna doonayaa saxiixa xiddig da’ayar ah isla markaana mustaqbalka hoggaamin doona Reds, gaar ahaan maadaama Salah, Mani iyo Firmino ay qarka u saaran yihiin inay jirsadaan 30 sano.
Sidaas darteed Liverpool ayaa bilowday inay raadiso mustaqbalka kooxda laga biloowo xilligan, waxaana iska cad in Jadon Sancho uu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee laga heli karo suuqa kooda ugu fiican, kaddib markii uu dhaliyay 29 gool isla markaana uu caawiyay ku dhawaad 29 gool kale, labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay.
Xagaagii la soo dhaafay waxaa lagu arkay isku dayo badan oo ay sameysay Manchester United si ay u xaqiijiso saxiixa Sancho, laakiin ugu dambeyntii wuxuu go’aansaday inuu la sii joogo kooxdiisa Borussia Dortmund.
Haddaba sida laga soo xigtay wargeyska “Kicker” ee dalka Germany Sancho ayaa doorbidaya inuu u dhaqaaqo Liverpool halka uu u dhaqaaqi lahaa Manchester United, sababtoo ah wuxuu dareensan yahay in fursadaha uu ugu guuleysan karo koobab ay aad u sarreyn doonto haddii uu ku biiro wiilasha Jurgen Klopp.